Mogadishu Journal » 2018 » September » 13
Sida ay sheegayaan wararka imaanaya talyaaniga wakiilka xidiga weerarka kaga ciyaara Napoli ee Lorezo Insigne ayaa niyad jabiyay kooxaha xiisaynaya xidigan. Insigne ayaa xiisa ka helayay kooxo waa wayn oo reer yurub ah kuwaas oo ay ugu horreeyaan Chelsea iyo Liverpool. Yeelkeede,...
Mjournal :-Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista maanta ay sheegeen baarlamaanka Galmudug in isaga ay ku sameeyeen, kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb. Cali Gacal ayaa sheegay xubnaha xilka ka qaaday in...
Mjourmal :-Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug ayaa sheegaya in kulan ay isugu yimaadeen Xildhibaanada Baarlamaanka ay xilka kaga qaadeen Guddoomiyihii Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir. Kulankan ayaa waxaa soo xaadirtay illaa 147...
Mjournal :-Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed C/laahi Salaad (Oomaar) ayaa magaalada Montréal kulan kula qaatay madax ka tirsan hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan duulista hawada ee ICAO. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa ku simaha agaasimaha hay’adda...
Mjournal :-Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa bogaadisay heshiiska rasmiga ah ee ay gaareen dhinacyadii isku hayay Suudaanta Koonfureed, kaddib shir aan caadi ahayn oo hal maalin ah oo Madaxda Urur Goboleedka IGAD ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee Dalka Itoobiya. Madaxda...
Mjournal :-Inta ugu badan taageerayaasha Manchester City ayaa walwal iyo wax is weydiin ka qaaday qorshaha Pep Guardiola uu ugu laabanayo Barcelona. Macallinka ugu guulaha kubadda cagta 10-kii sano ee lasoo dhaafay ayaa carrabka ki dhuftay inuu doonayo in xirfaddiisu ay ku...
Mjournal :-Xoogagga Suuriya ee Maraykanku uu taageero ayaa bilaabay wajigii ugu dambeeyey ee hawgalka ay ururka Daacish uga sifaynayaan goobihii ugu dambeeyey ee Waqooyi Bari Suuriya. Sarkaalka ugu sareeya militaiga Britain ee hoggaamiya isbahaysiga Maraykanku uu hoggaamiyo ayaa...
Mjournal :-Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursale Sheekh C/raxmaan ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay illaa todobo musharax oo u taagan xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed. Kulankan oo saacado qaatay ayaa looga hadlay is bedel ka...
UN Secretary-General Antonio Guterres has appointed Nicholas Haysom of South Africa as his special representative for Somalia and head of the UN peacekeeping mission in the country, Guterres’ press office said Wednesday. Haysom will succeed Michael Keating of Britain....
Mjournal :-Magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya waxaa lagu soo gaba gabeeyay shir aan caadi aheyn oo ay yeesheen madaxda dowladaha ku bahoobay urur goboleedyada IGAD. Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka qeyb...